१० लाखमा भनेजस्तै घडेरी काठमाडौं शहरमा । नसोच्ने गरी घट्यो घडेरीको मूल्य – AB Sansar
१० लाखमा भनेजस्तै घडेरी काठमाडौं शहरमा । नसोच्ने गरी घट्यो घडेरीको मूल्य
October 4, 2020 adminLeaveaComment on १० लाखमा भनेजस्तै घडेरी काठमाडौं शहरमा । नसोच्ने गरी घट्यो घडेरीको मूल्य
खुसिको खबर – दशैको अवसरमा NCELL ले ल्यायो यति सस्तो डाटाप्याक र कल अफरहरु !
एकाबिहान आयो दुखद खबर: बसले ठ’क्क’र दिदा रहिनन हामिमाझ नेत्री रेग्मी !
असइ गोविन्द विक सङ्गै बी’भ’त्स ह’त्या गरिएका प्रहरी जवान राम बहादुर साउदको ससम्मान अ’न्त्ये’ष्टि
स्वयम्भू र पशुपतिका बाँदर र कुकुर भोकभोकै मर्ने स्थितिमा